Tence Mena " Tsy manao film aho fa tena marary"
Nivoaka tamin’ny fahanginana i Tence Mena manoloana ireo resabe miparitaka momba azy.
Betsaka mantsy ireo mitsara ivelany fotsiny fa voakarama amin’ny Euro mihitsy ity mpanankato malaza iray ity hilaza amin’ny mpiray tanindrazana ny fisian’ny aretina coronavirus fa tsy misy eto amintsika akory izany. Misy koa ireo milaza fa manao film fotsiny izy ….Tsy izaho ve no tena olona tsy vanona hoy izy raha tena misy tokoa izany ? Miantso ireo tsy mino sy manenjika azy mafy araka izany i Tence Mena ho avy hitsidika azy any amin’ny hopitaly CHU Anosiala izay hitsaboana ireo olona mararin’ny coronavirus ary hifampikasoka . Farany moa dia tsy adinony ny nanentana ny rehetra mba hijanona any an-tokantranony avy fa tsy misy misangy ny coronavirus no sady tsy mifidy tavan’olona.